Prime Day: ọnụ ahịa na mobiles na smartwatch nke ị ka nwere ike iji | Gam akporosis
Prime Day: ọnụ ahịa na mobiles na smartwatch nke ị ka nwere ike iji
Onyeka Onwenu | 22/06/2021 17:16 | Mobiles
Amazon Prime Day 2021 malitere site na ọtụtụ onyinye dị mma na teknụzụ, ụlọ na akpaaka ụlọ, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ dị. Smartphones ka bụ otu n'ime ngwaahịa ndị ama ama, mana ndị ọzọ ewerela ọnọdụ etiti bụ kọmputa, smartwatches, ndị na-ehicha agụụ, igwe kọfị, brushes eletrik na ndị ọzọ.
Ọ bụ oge dị mma ịgbanwe ekwentị, gbanwee onye na-eme kọfị n'ụlọ n'ihi nnukwu ọdịda nke ọtụtụ puku ihe. Daybọchị Prime Day 2021 malitere na June 21 wee kwụsị taa June 22 na 23:59 pm, ya mere a ka nwere awa ole na ole iji rite uru dị iche iche.
Obi abụọ adịghị ya na otu n'ime smartphones kachasị mkpa nke ndị na-emepụta POCO, bụ ụdị nke Xiaomi ugbu a. POCO X3 Pro bụ ngwaọrụ dị elu jiri ihuenyo 6,67 nke anụ ọhịa IPS (120 Hz Refresh rate), Snapdragon 860 processor, 6 GB nke RAM na nchekwa 128 GB.
Otu n'ime njirimara nke na-eme ka ọ bụrụ ihe dị mkpa dị na MIUI 12 interface, oyi akwa na-arụ ọrụ n'okpuru sistemụ arụmọrụ nke Android 11. Poco X3 Pro na-ebunye anya azụ anọ, nke mbụ bụ 48pipixels, nke abụọ bụ 8pipixel wide wide, 2 megapixel macro na ihe omimi 2 megapixel.
O nwere ike nweta POCO X3 Pro naanị € 169 ọ bụrụ na ị na-eme ya na njikọ a
Otu n'ime ọkọlọtọ Samsung jisiri ike jigide ọfụma ahịa nke ụdị ndị gara aga na ọpụpụ nke 20 Galaxy Note. Ọ na-etinye 6,7 "ụdị Super AMOLED Plus dị larịị" Full HD + mkpebi, ọnụọgụ 60 Hz na 20: 9 ruru.
Samsung Galaxy Note 20 na-ejikọta Exynos 990 dị ka ụbụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, 8 GB nke Ram, 256 GB nke nchekwa na batrị 4.400 mAh. Ekwentị mkpanaka na-abịa na nsụgharị kachasị ọhụrụ nke gam akporo na One UI 3.1 oyi akwa, nke gụnyere ọtụtụ atụmatụ dị mkpa.
Nwere ike ịzụta Samsung Galaxy Note 20 4G naanị only 804 site na njikọ a
Onye Asia na-emepụta Xiaomi malitere na Septemba afọ gara aga ngwaọrụ ezubere iji kpuchie akụkụ ọ bụla, gụnyere egwuregwu. Xiaomi Mi 10T Pro bụ ekwentị 5GTụkwasị na nke ahụ, CPU bụ Snapdragon 865 a maara nke ọma na ihe ngosi Adreno 650, nke kwesịrị ekwesị maka ịkwaga egwuregwu ọ bụla gam akporo vidiyo.
N'etiti atụmatụ ya, Xiaomi Mi 10T Pro nwere 8 GB nke RAM, 128 GB nke nchekwa dị n'ime, nnukwu batrị 5.000 mAh dị elu nke nwere ngwa ngwa 33 na-agụnye dị ka onyinye Mi Electric Scooter 1S ndidi. Ọ bụ a elu-ọgwụgwụ ama na a 108 megapixel mmetụta, otu n'ime ndị kasị ike taa.
Nwere ike ịnweta Xiaomi Mi 10T Pro naanị € 549,99 site na njikọ a
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa ugbu a smartwatches ekele na nkà na ụzụ gụnyere dị ka ọkọlọtọ. Samsung Galaxy Watch 3 na-akwado panel Super AMOLED nke 1,2-inch na mkpebi 360 x 360 pixel na Corning Gorilla Glass DX nchedo, zuru oke maka iguzogide ọkọ, nrụgide na ọdịda.
Galaxy Watch3 nwekwara 9110 GHz Exynos 1,15 Dual-Core processor, 1 GB nke Ram, nchekwa 8 GB na batrị 340 mAh. Thekpụrụ bezel bụ rotatable, ọ bụ submersible ruo 5 ATM na sistemụ arụmọrụ dabere na Tizen 5.5. Njikọ elekere bụ Wi-Fi, Bluetooth 5.0, na njikọ LTE.
Nwere ike ịzụta Samsung Galaxy Watch3 naanị 255,59 site na njikọ a
Garmin Fènix 6 PRO bụ smartwatch ezubere maka ndị njem ahụ ndị hụrụ njem ugwu n'anya, na-agagharị ma ọ bụ na-aga igwu egwuregwu. Smart smart nwere maapụ site na ika, ma e wezụga ịkpọ egwu, na-atụle ọnụego obi, niile na ekele ya maka ihe mmetụta ya.
Ihuenyo Garming Fènix 6 Pro bụ sentimita 1,2, nwere nnwere onwe nke 14 ụbọchị iji, njikọta Bluetooth, Wi-Fi, GPS na njikọ kpọmkwem na ọrụ ndị dị ka Spotify na Deezer. Smartwatch nwere ihe nke 4.7 x 4.7 x 1.47 cm na ibu nke naanị 80 gram.
Nweta Garni Fènix 6 Pro maka naanị € 459,99 site na njikọ a
Cupertino firmware na iPhone 12 kwalitere otu n'ime igwe nwere ngwaike ihe eji eme ihe na ihe ohuru ohuru. Ekwentị na-ebunye 6,1-inch anụ ọhịa Super Retina XDR, ike karịa iko nke ekwentị ọ bụla yana mkpebi nke pikselụ 2.532 x 1.170.
IPhone 12 mgbawa bụ 14nm Apple A5 Bionic, 128GB n'ime nchekwa, iOS 14 dị ka sistemụ nrụọrụ na igwefoto azụ abụọ, ịbụ isi ihe mmetụta nke 12 MP QuadLED flash na obosara nke 8 megapixels. Ọnụ nke iPhone 12 bụ euro 833.
Nwere ike ịzụta iPhone 12 maka naanị € 822 site na njikọ a
Otu n'ime laptọọpụ zuru oke maka egwuregwu bụ ASUS TUF Dash F15 TUF516PM-HN135. Emepụtara ma mepụta ya tupu aha ọ bụla, na mgbakwunye na ịwụnye otu ngebichi kachasị mma na ahịa na naanị 15,6 inch Full HD (1920 x 1080) na ọnụego ume nke 144 Hz.
Nhazi ọ batara bụ Intel Core i7-11370H processor Intel, 16 GB nke RAM, 512 GB SSD nchekwa, NVIDIA GeForce RTX3060-6GB GDDR6 eserese kaadị na ibu dị naanị kilogram 2,3. Laptọọpụ nwere keyboard QWERTY na batrị dị elu.
Nwere ike ịzụta ASUS TUF Dash F15 TUF516PM-HN135 maka naanị € 999,99 na ịpị njikọ a
Otu n’ime obere laptọọpụ kachasị dị na ahịa, na-eri naanị kilogram 1,38. Huawei Matebook D14 biara na ihuenyo 14-inch Full HD + IPS (1920 x 1080 pikselụ), na-egosipụta oke mma ka foto na vidiyo HD.
El Huawei Matebook D14 biara na Intel Core i5 processor 10210U na 1,6 ka 4,2 GHz nke ike, 8 GB nke RAM, 512 GB SSD, kaadị eserese GeForce MX250 na sistemụ arụmọrụ Windows 10 Home. Ọ nwere Huawei One Touch fingerprint sensor iji gbanye ya ma nweta kọmputa na mfe site na ịpị bọtịnụ ike.
Nwere ike ịzụta laptọọpụ Huawei Matebook D14 maka naanị € 710 site na njikọ a
Igwe onyonyo abụrụla ihe dị mkpa maka ụlọ na ụlọ ọrụ. Betzọ doro anya ma a bịa n'ịchọ ịhụ ọdịnaya kacha dị ndụ bụ Samsung nwere ụdị UHD 2020 55TU8005 ya, Ngosipụta 55-inch Crystal, 4K mkpebi, 4K processor, PurColor na njikọta olu olu Alexa.
Na-etinye HDR 10+, teknụzụ nke na-emepụta oji na ike ọkwa nke nkọwa nke ọnọdụ ọ bụla, Nlele ọtụtụ iji hụ ihe ihuenyo ekwentị na-emegharị na ihuenyo na Tizen dị ka sistemụ arụmọrụ. Ọnụahịa nke Samsung UHD 2020 55TU8005 bụ euro 469, ha niile nwere nchekwa nke 33%.
Nwere ike ịzụta Samsung UHD 2020 55TU8005 maka naanị € 469 site na njikọ a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Prime Day: ọnụ ahịa na mobiles na smartwatch nke ị ka nwere ike iji